DIGITAL MGBE MGWU
Ekele dịrị Meokon na Mahadum Ndịda Ọwụwa Anyanwụ maka itinye aka na nkwekọrịta nkwekọrịta nkwekọrịta
Shanghai Meokon Sensor Technology Co., Ltd. na Cyberspace Security nke Mahadum Ndịda Ọwụwa Anyanwụ bịanyere aka na nkwekọrịta nkwekọrịta nkwado iji guzobe ụlọ ọrụ R&D na Nanjing Na May 13, 2021. Chen Delong, Onye isi njikwa nke Meokon, Cheng Guang, Dean of Nche nke Cyberspace nke ...
Meokon Smart Fire Pressure nlele Nwere Ike Monitorghọta Remote Monitoring
N'oge a, na nkọwapụta na-aga n'ihu nke atumatu nkwado mba, ọtụtụ ngwa nchedo ọkụ ọkụ ejirila nwayọọ nwayọọ gbasaa na mpaghara dị iche iche, dịka obere ebe itoolu, ụlọ elu dị elu, ogige azụmahịa, petrochemicals, ọdụ ụgbọelu ụgbọ elu, ogige ntụrụndụ ụlọ ọrụ na ndị ọzọ. ..
Site na mmepe nke Internet nke Ihe na nnukwu teknụzụ data, yana ngwa ngwa nke ụlọ ndị nwere ọgụgụ isi na obodo ndị mara mma, nyocha teknụzụ na mmepe na ntinye ngwaahịa nke ọnụ ụzọ ikuku na-aga n'ihu. Na nke a, ozugbo Bluetoo ...
The dijitalụ esi mgbali transmitter bụ "jupụtara n'ezi obi"
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, ọnọdụ mmepe akụ na ụba na teknụzụ ụwa agbanweela nnukwu mgbanwe. N'ịbụ nke ọgbọ ọhụụ nke teknụzụ ihe ọmụma na teknụzụ nkwukọrịta na-eme, akụnụba mba m anọgidewo na-emeziwanye digitization, networkin ...
Iji mee ka njikọta otu, nkwukọrịta na mmekorita; melite mmata nke na-arụsi ọrụ ike imekọ ihe ọnụ na nkwurịta okwu nkà, na-agba ume otu òtù chere ihu ịma aka, gbasaa site onwe ha, enweta nwere, na hapụ ahuhu; mee ka ụlọ ọrụ nwee mmekọrịta chiri anya ...
Na Nọvemba 11, 2020, emere mmemme ọzọ kwa afọ "Meokon Smart Sensor Sikolas". Mmemme MEOKON SENSOR TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO bidoro mmemme a, LTD yana mmemme a bụ ịgba ndị mahadum ume ka ha nwee ọkaibe na ọgụgụ isi ihe ọhụụ. Onu akwukwo akwukwo a ...
N'ụtụtụ nke ọnwa Disemba 13, ngalaba nke Shenzhen nke MEOKON Sensor Technology (Shanghai) Co., Ltd. mere emume mmeghe. Maazị Andy, onye isi njikwa Shanghai MEOKON, Mr. Qiu, onye isi njikwa nke Chongqing MEOKON, na Mr. Ren, ...
Shanghai Meokon: The Bluetooth ọrụ bụ “pụtara ìhè”, mara mma ma dị ike wireless Bluetooth mgbali transmitter
Site na mmepe mmepe nke teknụzụ dị egwu dị ka ofntanetị nke Ihe na ọgụgụ isi, iwu nke obodo ndị mara mma, ọkụ ọkụ ọkụ, wdg. Ọtụtụ ubi dịka ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọkụ ọkụ, nchekwa gburugburu ebe obibi, petrochemicals, wdg.